Edgemesh: I-ROI ye-Ecommerce Site Speed ​​njengeNkonzo | Martech Zone
Edgemesh: I-ROI ye-Ecommerce Site Speed ​​njengeNkonzo
NgeCawa, uDisemba 5, 2021 NgeCawa, uDisemba 5, 2021 UYakobi Ongenaluthando
Kwihlabathi elikhuphisanayo le-e-commerce enye into eqinisekileyo: Isantya sibalulekile. Study emva isifundo iyaqhubeka nokungqina ukuba isiza esikhawulezayo sikhokelela ukwanda kwamazinga oguqulo, ukuqhuba amaxabiso aphezulu okuphuma kwaye kuphucula ukwaneliseka kwabathengi. Kodwa ukuhambisa amava ewebhu okukhawulezayo kunzima, kwaye kufuna zombini ulwazi olunzulu loyilo lwewebhu kunye nesiseko sesibini "somphetho" oqinisekisa ukuba indawo yakho isondele kubathengi bakho ngokusemandleni. Kwiindawo ze-e-commerce, ukuhambisa amava okusebenza okuphezulu kunokuba nzima kakhulu-kunye neqonga elininzi kunye nokuxhomekeka kwesicelo somntu wesithathu ukuqhuba ubunzima kwi-11.
Ukunyathela kwesi sikhewu kuyaziwa kancinci, kwaye kuyimfihlo ethile ebizwa ngokuba yi "Speed ​​as a Service". Edgemesh. Yasekwa ngo-2016, i-Edgemesh ibonelela ngenkonzo yokukhawulezisa i-turnkey leyo amandla amakhulu abathengisi be-intanethi ezisa amanye amava akhawulezayo kwi-intanethi kwiwebhu. Kule Martech ikhethekileyo, sintywila nzulu kwinto eyi-Edgemesh, isebenza njani kwaye luhlobo luni lomsebenzi wokwandisa abathengi ababona ngeqonga lokukhawulezisa.
Ngo-2021, u-Edgemesh wayikhupha Iseva ye-Edgemesh imveliso-inkonzo epheleleyo edge yokukhawulezisa iqonga ehambisa ngokuphandle iisayithi 30-70% ngokukhawuleza nangoku. I-Edgemesh Server, esebenza kwiinethiwekhi ezimbini zokuhanjiswa komxholo (i-Cloudflare kunye ne-Fastly), i-platform yokusebenza kwenkonzo epheleleyo. Ngokutsho kwe-Edgemesh, iseva ithatha nayiphi na iwebhusayithi ekhoyo kwaye ifudukele ngaphandle komthungo kumda womnatha ngelixa isongeza inani lokuphucula ukusebenza. Okungakumbi kulo ngezantsi.
Umxhasi we-Edgemesh si-in-browser, okanye i-client-side, isisombululo sokukhawulezisa. Abathengi bongeza uMthengi we-Edgemesh ngokudibanisa okukodwa okanye ngokongeza umgca omnye wekhowudi kwindawo yabo ekhoyo. Iiplagi ziyafumaneka ngoku WordPress, Shopify kunye ne-Cloudflare. Inkqubo yokufakela iqondile kwaye ithatha malunga nemizuzu emi-5.
Ukusuka apho, umxhasi we-Edgemesh wongeza izinto ezimbini: ukubeka iliso komsebenzisi wangempela (ukubonisa ukusebenza kwesayithi ngokusekelwe kumava omthengi wangempela) kunye ne-caching yecala lomxhasi. I-Edgemesh yongeza i-caching yecala lomthengi okrelekrele ngokusebenzisa isakhelo soMsebenzi weNkonzo-imodeli eyilelwe ekuqaleni ukuvumela iiwebhusayithi ukuba zisebenze ngaphandle kweintanethi. Oku kunceda ukunyusa umthamo womxholo isikhangeli esinokubamba kwindawo, ukunciphisa izicelo zomthengi kumncedisi ngokwawo. Oku kukodwa kunika isantya sezinto eziphathekayo, kodwa umlingo uvela kwi-logic "pre-cache".
Ngokusekelwe ekusebenzisaneni kwabasebenzisi bokwenyani kunye neemetrics zokusebenza, u-Edgemesh ngokuhlakanipha wandisa i-cache yesiphequluli ukuqinisekisa ukuba ii-asethi ezininzi zilayishwe ngaphambili kubasebenzisi-ngokuqinisekileyo ukuqikelela ukuba umthengi uya kuhamba phi kwaye uzama ukuhlala isinyathelo esinye phambili. Impembelelo yokusebenza inokubonwa kwi-portal ye-Edgemesh, kunye nabasebenzisi "abakhawulezayo" abangabo apho i-cache yecala lomxhasi isebenze i-10% okanye ngaphezulu kwephepha, kunye nabasebenzisi "abangeyokukhawuleziswa" ibe ngabo babengenanzuzo encinci kubo. i-cache yecala lomxhasi i-Edgemesh iyadala. Ngokusekelwe kwizifundo zabathengi bokwenyani, uMthengi we-Edgemesh unceda ukunyusa isantya sesayithi nge-20-40%.
I-Edgemesh yokuKhawuleza ngokuSebenzayo
Edgemesh uMthengi wokuSebenza
Usebenziso lweseva ye-Edgemesh
Umxhasi ukwabamba kunye namandla kwinqanaba elinzulu ledatha yokusebenza. Le datha iqokelelwa kubasebenzisi bokwenyani kwiwebhusayithi yakho-into ebizwa ngokuba yidatha yendawo. Kukho abantu abaninzi abakhuphisana nabo kwesi sithuba, kuquka i-Relic eNtsha, i-App Dynamics kunye ne-Datadog-kodwa i-portal ye-Edgemesh ijoliswe ekuboniseni idatha yokusebenza ngeendlela ezihlalutyiweyo zangaphambili esizifumene zinembile.
Ngokomzekelo, i-metric nganye yokusebenza inemigangatho echazwe kwangaphambili yento ethathwa njenge-Fast, i-Avareji kunye ne-Slow (umbala ofakwe kwikhowudi yokulula) -ukuvumela nabani na ukuba abone ngokukhawuleza iindawo ezifuna ukuphuculwa. Yonke imetriki yokusebenza ekhoyo ukuze kuhlalutywe iyabanjwa kwaye ukusebenza kunokwahlulwa ngesixhobo, inkqubo yokusebenza, ijografi okanye ngephepha ngalinye. Ukongeza, i-portal ibonisa idatha yexesha lenqanaba le-API-ekuvumela ukuba ubone impembelelo yeskripthi yomntu wesithathu kunye nezicelo ekusebenzeni kwendawo yakho, kwakhona kunye neekhonkco ezikhawulezayo zokubonisa usetyenziso olucothayo kuphela.
I-Edgemesh Server liqonga lokukhawulezisa inkonzo epheleleyo. Ngokungafaniyo noMthengi we-Edgemesh, isisombululo seServer sifuna inkqubo yokukhwela enye-on-one. Oko kwathiwa, ukuthunyelwa kulula ngokufanayo-kunye nabathengi bahlaziya irekhodi enye ye-DNS ukuze baye kwi-platform ye-Edgemesh.
Iseva ye-Edgemesh ihleli phezu kothungelwano olukhulu lokuhanjiswa komxholo-iCloudflare kwaye ngokukhawuleza. Nge-Edgemesh Server, iindwendwe zibethe "i-edge esed" inguqulelo yewebhusayithi yakho, inciphisa kakhulu ixesha elithathiweyo ukuhambisa iphepha. Ukongeza, i-Edgemesh Server ngokuzenzekelayo kwaye ngokuphandle yenza inani lee-tweaks zomgangatho woshishino, kubandakanya:
Ukuphucula imifanekiso kwiifomati zesizukulwana esilandelayo kuquka i-AVIF
Ukuphucula i-protocol yoqhagamshelwano kwi-HTTP/3 xa ikhona
Ukuhambisa umxholo kwimvelaphi (domain un-sharding)
Ukongeza izikhokelo zokulayisha kwangaphambili kunye nokulayishwa kwangaphambili kwephepha eliguqukayo
Ukongeza uMxumi we-Edgemesh
Kwiinkampani ze-e-commerce, i-Edgemesh Server ibavumela ukuba bahlale kwiqonga labo elikhoyo (umzekelo Shopify) ukanti ufumane izibonelelo zokusebenza kwendawo elungiselelwe isiko elingenantloko. Ngexesha leeholide elisemva kwethu ngoku, u-Edgemesh wabelane ngemizekelo yokusebenza kweenzuzo zabathengi babo nge-Edgemesh Server:
Iziphumo zeLizwe lokwenyani
U-Edgemesh unenani leemeko zezifundo ezifumanekayo kwiwebhusayithi yabo, kodwa banike imizekelo ecacileyo yazo zombini iinzuzo zokusebenza kunye neempembelelo zesiphumo kwizinga lokuguqulwa. Ngokusekelwe kwidatha enikeziweyo esinokuqinisekisa-imicimbi yesantya!
Cela iDemo ye-Edgemesh
U-Jake Loveless uneminyaka engamashumi amabini yomsebenzi wokwenza iteknoloji ihambe ngokukhawuleza. Ukusuka kwiinkqubo ezisezantsi zokurhweba nge-latency kwi-Wall Street ukuya kwiiplatifti ezinkulu zewebhu zeSebe lezoKhuselo ukuya kwiinethiwekhi ze-microwave kwiinkampani zonxibelelwano-uJake uye wanceda ukuqhubela phambili isofthiwe kwimida yesantya emitsha. Namhlanje, uJake uyabaleka Edgemesh, Inkampani yehlabathi yokukhawulezisa iwebhu iye yaseka kunye namaqabane amabini kwi-2016. I-Edgemesh inceda iinkampani ze-eCommerce kuwo wonke amashishini amaninzi kunye namaqonga ahambisa i-20-50% ngokukhawuleza imithwalo yekhasi kubasebenzisi emhlabeni jikelele.
Iintlawulo zeBluetooth zivula njani imida emitsha
Ukubuyisela umva: Uyigcina njani ngokuzenzekelayo iShopify yakho okanye iShopify Plus Store